Ukudibanisa iVenzi engaqhelekanga yesiSpanish Venir (eza)
Izenzi zaseSpain ziwela kumaqela ahlukeneyo, kwaye iqela ngalinye lidityaniswa ngokwahlukileyo. Ukuba uza kugagamela izenzi Spanish ezifana yiza , Kuya kufuneka ukuba ubenakho ukufumanisa ukuba leliphi na iqela lesenzi: rhoqo (ilandela imigaqo yokuhlangana rhoqo -ar, -er, kwaye -ir izenzi), ukutshintsha isiqu (morphs kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisa ngayo kwisivakalisi), utshintsho kupelo (Utshintsho lopelo lwamaqabane kuhlobo oluthile lokulandela imigaqo yokubiza amagama), okanye Ukucinga (ibonakalisa inyathelo emva kumxholo wesivakalisi).
Kodwa ke kukho ezo izenzi ziyala ukukhanyiselwa kudidi: izitenxo. Ngexesha langoku, yiza ( nguyen imbeko ) (ukuza) une ngu- ukuya -e utshintsho lwesiqu kuzo zonke ngaphandle kwe mna, thina abanye , kwaye wena iifom. Inkqubo ye- mna form ayiqhelekanga ngokupheleleyo. Ezinye izenzi ezingaqhelekanga zaseSpain zibandakanya: yenza , ndifuna , venir kunye neser. Nalu ulwalamano lwangoku:
Ixesha langoku le Yiza
ndiyeza Mna yiza
uyeza Wena (ngokungekho sikweni) yiza
uyeza / uza / omnye uza Nguye / yena iyeza
uyeza Wena (ngokusemthethweni) yiza
size Thina yiza
uyeza Wena konke (okungacwangciswanga) yiza
bayeza Bona yiza
uyeza Nonke (ngokusesikweni) yiza
Le mizekelo ilandelayo iyakubonisa yiza kwisenzo:
ingakanani i-amoxicillin yenja
URodolfo noMarisol bavela elunxwemeni. (URodolfo noMarisol bavela elunxwemeni.)
Ndivela kwiholo. (Ndivela kwiholo.)
Kwangaphambili, yiza Inesiqu esingaqhelekanga: isiselo somdiliya -. Qaphela kwakhona ukuba ayinazimpawu zokugxininisa ezisetyenziswa kwangaphambi kokungena. Thatha ujongo:
Ixesha langaphambili le Yiza
ndasuka Mna weza
Ufikile Wena (ngokungacwangciswanga) weza
yena / yona / enye yeza Nguye / yena weza
ufikile Wena (ngokusemthethweni) weza
size Thina weza
ufikile Nonke (ngokungacwangciswanga) weza
beza Bona weza
ufikile Nonke (ngokusesikweni) weza
Usebenzisa ixesha langaphambili ngolu hlobo:
ungathatha i-tylenol nge-prednisone
Sifike emva kwexesha emgidini. (Sifike ethekweni emva kwexesha.)
Ukhawuleze wafika? (Ngaba ufike kwangoko?)
Uyekile kwi-hook kunye notshintsho lweziqu kokungagqibelelanga; yiza udibanisa ngesiqhelo kweli xesha. Jonga le theyibhile ilandelayo kunye nemizekelo.
Ixesha elingafezekanga Yiza
ndasuka ndandiqhele uku yiza
ufikile Wena (ongacwangciswanga) ubuqhele yiza
yena / yona / enye yayiza Wayeqhele ukuba njalo yiza
ufikile Uqhelekile (ngokusesikweni) yiza
size Sasiqhele ukwenza njalo yiza
ubusiza Nonke (anikho sesikweni) benikade nikwenza oko yiza
bebesiza Babedla ngokwenza yiza
ubusiza Nonke (ngokusesikweni) benikade yiza
Nayi eminye imizekelo yexesha elingaphelelanga:
Sifikile kwibala lemidlalo kusasa. (Sasidla ngokuza ebaleni kusasa.)
Ndize ngaphandle kwepasi lam. (Ndize ngaphandle kwepaspoti.)
I-oval tv emhlophe 58
Yiza ikwanesiqu esingaqhelekanga rhoqo kwixesha elizayo: v end-. Nangona kunjalo, isebenzisa iziphelo eziqhelekileyo zekamva:
Ixesha elizayo le Yiza
ndiza kuza ndiza yiza
Uya kuza Uya (ngokungacwangciswanga) uyakwenza njalo yiza
yena / yona / enye iya kuza Uya kuthi / yena yiza
Uya kuza Wena (ngokusesikweni) uya kuthi yiza
Siza kuza Siza yiza
uya kuza Nonke (ngokungamiselekanga) niyakwenza njalo yiza
baya kuza Baza ku yiza
uya kuza Nonke (ngokusesikweni) niyakwenza njalo yiza
Ezi sampuli zilandelayo zibeka ixesha langoku lokusebenza:
Baza kuza endlwini yethu kulwamkelo. (Abantu baya kuza ekhayeni lethu ukuze bamkelwe.)
Ngaba uza kuza nabazali bakho? (Ngaba uza kuza nabazali bakho?)
faka ibhokisi yokujonga kwilizwi mac
yeyiphi ifayile esebenzayo
setha kwakhona ikhompyuter kumhla ongaphambili
Ixabiso elipheleleyo linokuba libi
uyile njani iqela le-facebook
yintoni isifo esosulelayo
bactrim yosulelo lwamazinyo